कालसर्प योगको त्रासदी | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
कालसर्प योगको त्रासदी
काठमाडौँ, साउन ३१ गते । नागपञ्चमीको सन्दर्भमा बजारमा अचेल कालसर्प योगको त्रासदी फैलाइएको छ । जन्म कुन्डलीमा राहु र केतु अकारक रूपमा देखापरेको अवस्थामा एकथरीले दोष मन्साउन भनेर कालसर्प योग निवारक पूजा आयोजना गरेका छन् । अर्काथरी ज्योतिषी यो योगको दम्भ सिधै त्रास फैलाएर ठगी खाने भाँडो मात्र भएको किटाणी गरिरहेका छन् ।
ज्योतिषी डा. सुनिल सिटौलाका अनुसार प्राचीन ज्योतिष साहित्यमा कालसर्प योगको कुनै चर्चा भेटिएको छैन । भारतबाट प्रकाशन भएको ज्योतिष रत्नाकरमा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको जन्म कुण्डली प्रस्तुत गर्दै यसले जीवनमा उतार चढाव ल्याउँछ भनिएको छ तर वास्तवमा यो यथार्थ हैन । यो योग परेकाले वंशलाई कष्ट दिने सन्तानको जन्म हुन्छ भनिएको छ तर अहिले यो योगको नाममा व्यापारीकरण भइरहेको छ, वास्तवमा यो यथार्थ पनि होइन । ‘यो योगसँग डराउनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन, यो योगको अस्तित्व देखापरेको पनि छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
ज्योतिष परिषद्का अध्यक्ष माधव पाण्डेका अनुसार कालसर्प योग काल्पनिक, अतिरञ्जनायुक्त , भ्रामक र असत्य भएको बताउनुहुन्छ । यसमा अपानाइएका पूजा पद्धति पनि कपोलकल्पित पाइएको उहाँको भनाइ छ । सदियौँदेखि चल्दै आएको नाग पञ्चमीको पूजालाई कालसर्प योगको दोष निवारण गर्ने भन्न थालिएको छ, यो कुनै शास्त्रमा नदेखिएको प्रमाण नजुटेको तथ्यहीन कर्म रहेको पाण्डेको भनाइ छ ।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार २०२१ सालमा नामुद पञ्च मणिप्रसाद लोहनीले राहु र केतुवीचका नौ ग्रह चर्चा गर्दै आफ्नो पुस्तकमा यो योगको नाम घुसाएका छन् । बुझ्दै जाँदा लोहनीको राहु केतुवीचको नौग्रह भन्ने पुस्तकमा व्यक्त श्लोक नै कपोलकल्पित रहेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय ज्योतिष परिषद् आवद्ध ज्योतिषी डा. लोकराज पौडेलले कालसर्प योग मिथ्या भएकोले भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभएको छ । भ्रममा मात्र हैन तर्सनुपर्ने पनि कुनै कारण छैन पौडेल भन्नुहुन्छ । यस्ले समग्र ज्योतिषी पेशाको धज्जि उडाएको छ, उहाँ भन्नुहुन्छ ।
कालसर्प योग निवारण आयोजक ज्योतिषी देवराज ढकाल भन्नुहुन्छ– जन्म कुण्डलीमा राहु केतु नागपञ्चमी साउन ३१ गते परेको छ । - सरोज आचार्य , गोरखापत्र दैनिकबाट
8/16/2018 11:58:00 AM